အမ်တီတီကို ပြန်လည်စောင့်ကြည့်နေပြီး စပို့တင်းချာတိတ်ကို ခေါ်ယူနိုင်ခြေနည်းတဲ့ အာဆင်နယ် - Arsenal Myanmar News
အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ ခံစစ်ကို ခြေစွမ်းရှိပြီး အတွေ့အကြုံမြင့်မားတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးကို ခေါ်ယူဖို့ လုပ်ဆောင်နေရာမှာ လိုင်လီရဲ့ ဂါဘရီယယ်လ် မာဂါလက်စ်အပြင် ဘာစီလိုနာရဲ့ ဆင်မြူယယ်လ် အမ်တီတီကိုလည်း အလိုရှိနေလို့ ပြန်လည်စောင့်ကြည့်မှုတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ ဂျရတ် ပီကေးနဲ့ ကလေမွန် လွန်ဂလေတို့နောက်ကို ရောက်နေတဲ့ အမ်တီတီဟာ နူးကမ့်ပ်မှာ အရေးပါမှု လျော့ကျခဲ့သလို အသင်းရဲ့ အရောင်းစာရင်းထဲကိုပါ ထည့်သွင်းခံထားရသူဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ မာနအရ နေရာရဖို့ကို ကြိုးစားနေပေမယ့် ကမ်းလှမ်းမှုကောင်း ရှိလာရင်တော့ လက်ခံစဉ်းစားသွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
ပေါင် ၂၅ သန်းလောက်နဲ့ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဒီ ၂၆ နှစ်အရွယ် ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်ကို အာဆင်နယ်အသင်းအပြင် အဲဗာတန်နဲ့ ဝက်စ်ဟမ်းတို့ကပါ စောင့်ကြည့်နေကြပြီး ရာသီကုန်ချိန်မှာ ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ရှိနေကြသလို နည်းပြ မီခယ်လ် အာတီတာအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ အားဖြည့်မှုလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းက အသံထွက်ခဲ့ပြီး ယူရို ၁၅ သန်းနဲ့ ကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြခဲ့တဲ့ စပို့တင်း လစ္စဘွန်းရဲ့ လူငယ်တောင်ပံကစားသမား ဂျိုယယ်လ်ဆန် ဖာနန်ဒက်စ်အတွက် ပေါ်တူဂီကို သွားရောက်ဆွေးနွေးဖို့ အာဆင်နယ်တာဝန်ရှိသူတွေက စီစဉ်နေတယ်လို့ ဆိုပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ သူ့အတွက် အရေးမသာဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
စာချုပ်လျော်ကြေး ပေါင်သန်း ၄၀ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် တောင်ပံကစားသမားအတွက် စပို့တင်းဘက်က စာချုပ်သစ် ကမ်းလှမ်းထားတာကို ကစားသမားအနေနဲ့ စိတ်ပြောင်းပြီး ပြန်လည်သဘောတူညီဖို့ ရှိနေတာကြောင့် အာဆင်နယ်တို့ရဲ့ စည်းရုံးမှုက လူငယ်တစ်ဦးအတွက်တော့ သိပ်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ မဖြစ်နိုင်ချိန်မှာ ပေါ်တူဂီမှာ ဆက်ရှိပြီး လျော်ကြေးစာချုပ်ကို နှစ်ဆတိုးမြှင့်ဖို့ ရှိနေတာကြောင့် စကတည်းက ဂန်းနားပရိသတ်တော်တ်ာများများက သဘောမကျဘဲ ငွေဖြုန်းတီးမှုလို့ ထင်မြင်နေတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ကတော့ ပျက်ပြယ်ဖို့ နီးစပ်နေပြီလို့ သိရှိရပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
UNICODE: အာဆငျနယျအသငျးအနနေဲ့ ခံစဈကို ခွစှေမျးရှိပွီး အတှအေ့ကွုံမွငျ့မားတဲ့ ကစားသမားတဈဦးကို ချေါယူဖို့ လုပျဆောငျနရောမှာ လိုငျလီရဲ့ ဂါဘရီယယျလျ မာဂါလကျဈအပွငျ ဘာစီလိုနာရဲ့ ဆငျမွူယယျလျ အမျတီတီကိုလညျး အလိုရှိနလေို့ ပွနျလညျစောငျ့ကွညျ့မှုတှေ ပွုလုပျနပေါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
ဘာစီလိုနာအသငျးမှာ ဂရြတျ ပီကေးနဲ့ ကလမှေနျ လှနျဂလတေို့နောကျကို ရောကျနတေဲ့ အမျတီတီဟာ နူးကမျ့ပျမှာ အရေးပါမှု လြော့ကခြဲ့သလို အသငျးရဲ့ အရောငျးစာရငျးထဲကိုပါ ထညျ့သှငျးခံထားရသူဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ မာနအရ နရောရဖို့ကို ကွိုးစားနပေမေယျ့ ကမျးလှမျးမှုကောငျး ရှိလာရငျတော့ လကျခံစဉျးစားသှားဖို့ ရှိနပေါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
ပေါငျ ၂၅ သနျးလောကျနဲ့ အရောငျးအဝယျဖွဈနိုငျတဲ့ ဒီ ၂၆ နှဈအရှယျ ပွငျသဈလကျရှေးစငျကို အာဆငျနယျအသငျးအပွငျ အဲဗာတနျနဲ့ ဝကျဈဟမျးတို့ကပါ စောငျ့ကွညျ့နကွေပွီး ရာသီကုနျခြိနျမှာ ချေါယူနိုငျဖို့အတှကျ လုပျဆောငျသှားဖို့ ရှိနကွေသလို နညျးပွ မီခယျလျ အာတီတာအတှကျ စိတျဝငျစားစရာ အားဖွညျ့မှုလညျး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးအတှငျးက အသံထှကျခဲ့ပွီး ယူရို ၁၅ သနျးနဲ့ ကမျးလှမျးထားတယျလို့ သတငျးတှကေ ဖျောပွခဲ့တဲ့ စပို့တငျး လစ်စဘှနျးရဲ့ လူငယျတောငျပံကစားသမား ဂြိုယယျလျဆနျ ဖာနနျဒကျဈအတှကျ ပျေါတူဂီကို သှားရောကျဆှေးနှေးဖို့ အာဆငျနယျတာဝနျရှိသူတှကေ စီစဉျနတေယျလို့ ဆိုပမေယျ့ လကျရှိမှာတော့ သူ့အတှကျ အရေးမသာဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
စာခြုပျလြျောကွေး ပေါငျသနျး ၄၀ သတျမှတျထားတဲ့ အသကျ ၁၇ နှဈအရှယျ တောငျပံကစားသမားအတှကျ စပို့တငျးဘကျက စာခြုပျသဈ ကမျးလှမျးထားတာကို ကစားသမားအနနေဲ့ စိတျပွောငျးပွီး ပွနျလညျသဘောတူညီဖို့ ရှိနတောကွောငျ့ အာဆငျနယျတို့ရဲ့ စညျးရုံးမှုက လူငယျတဈဦးအတှကျတော့ သိပျပွီး စိတျဝငျစားစရာ မဖွဈနိုငျခြိနျမှာ ပျေါတူဂီမှာ ဆကျရှိပွီး လြျောကွေးစာခြုပျကို နှဈဆတိုးမွှငျ့ဖို့ ရှိနတောကွောငျ့ စကတညျးက ဂနျးနားပရိသတျတျောတျာမြားမြားက သဘောမကဘြဲ ငှဖွေုနျးတီးမှုလို့ ထငျမွငျနတေဲ့ အပွောငျးအရှကေ့တော့ ပကျြပွယျဖို့ နီးစပျနပွေီလို့ သိရှိရပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
By AM Author| 2020-07-25T21:12:36+00:00	July 25th, 2020|News|Comments Off on အမ်တီတီကို ပြန်လည်စောင့်ကြည့်နေပြီး စပို့တင်းချာတိတ်ကို ခေါ်ယူနိုင်ခြေနည်းတဲ့ အာဆင်နယ်